ပိုင်အိုးနီးယားစားသောက်ဆိုင် ဆိုတဲ့ နာမည်တစ်လုံး ဖြစ်လာအောင် ခက်ခဲစွာ ကြိုးစားခဲ့ရပုံကို ပြောပြလာတဲ့ ဇော်မိုး ပိုင်အိုးနီးယား – ရွှေအလင်း
၁၄နှစ်သားပိုင်အိုးနီးယား 14years_Old ( 18/07/2004 -2018 )
၁၃နှစ်သားပိုင်အိုးနီးယား အကြောင်းတင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်မည်သို့မည်ပုံ Fbပေါ်မှပျောက်သွားသည်မသိ။အခု(၁၄)နှစ်ပြည့်အမှတ်တရအဖြစ်ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ရပါသည်။ဒီနေ့(၁၈.၇.၂၀၁၈ )ဟာ ပိုင်အိုးနီးယား စားသောက်ဆိုင် ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ (၁၄)နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပါ။အဖေနဲ့အမေရဲ့ ယုံကြည်စွာ တာဝန်ပေးမှုနဲ့အတူ…ကျွန်တော်ရဲ့စေတနာ၊ကံ၊ဥာဏ်၊လုံးလ၊ဝီရိယ တို့ကို အရင်းတည်ပြီး နေ့/ညမပြတ် ရိုးသားစွာကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ရလာဒ်တစ်ခုကတော့ ယနေ Pioneer Food Centre ဆိုတဲ့ နာမည်တစ်ခု စားသောက်ဆိုင်လောကမှာ အခိုင်အမာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာပါပဲ ။ ဒီနာမည်လှလှလေးကို ပေးခဲ့သူက ကျွန်တော်အဖေပါ။
လူသူမထူထပ်သေးတဲ့ကေတုမတီမြို့သစ်ကလေးမှာ စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်မယ်လုပ်တော့ တချို့လူတွေက ကျွန်တော်တို့သားအဖကို အရူးတဲ့။ လူတွေဘယ်လိုပဲပြောနေပြောနေ ပိုင်အိုးနီးယား ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် လူသူမထူထပ်သေးတဲ့ ကေတုမတီမြို့သစ်လေးမှာအောင်မြင်စွာပေါက်ဖွားလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
စရောင်းခါစက..လူနေ အလွန် ကျဲပါးတဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကို အားကိုးလို့ မရပေမဲ့ တောင်ငူကနေ ၁၄မိုင်ဝေးတဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်လေး ကို လာရောက်အားပေးကြတဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေများပြားခဲ့သလို..နေပြည်တော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုသွားကြတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကလည်း ကေတုမတီမြို့သစ်လေးမှာတည်ရှိနေတဲ့ ပိုင်အိုးနီးယား စားသောက်ဆိုင်ကို မဖြစ်မနေ တစ်ထောက်ရပ်နားအနားယူရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုအဖြစ်သဘောထားလာကြတာက ပိုင်အိုးနီးယားရဲ့ ရှင်သန်ခြင်းအစပါ ။
Express ကားတွေ စရောင်းဖြစ်ခဲ့တာကလည်း ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတစ်နှစ်အကျော်မှာ ယာဉ်လိုင်းတစ်လိုင်း ကျွန်တော်ဆီကိုလာရောက် ချိတ်ဆက်ရာမှ စတင်ပြီး Express ကားရပ်နားတဲ့ဆိုင်လောကထဲကို ကျွန်တော်စပြီးကူးပြောင်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။
Express ကားလောက ကို ရောင်းချရတာ သာမန် ရိုးရိုးစားသောက်ဆိုင်တွေရောင်းချတာနဲ့မတူပါဘူး။ကားတစ်စီး လူအယောက် ၄၀ကျော်ကို နာရီဝက်အတွင်း အစားအသောက် အမြန် ရောင်းချရတဲ့လုပ်ငန်းပါ။နာရီဝက်ဆိုတာထက် သန့်စင်ခန်းသွားပြီးကျန်တဲ့အချိန် လေးမှာ မှာတာကို အရောက်ချပေးရတဲ့ ရောင်းချနည်းတစ်မျိုးပေါ့။
ဒီလိုရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက် အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့အဖို့ လွယ်ကူလှတဲ့အရာတခုတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ယခင်က လမ်းဟောင်း Express ကားလောကဆိုင်တွေဖြစ်တဲ့စိန်ပန်းနီစားသောက်ဆိုင်(ပဲခူး) ၊ ရန်ကုန်ထမင်းဆိုင်(ကျွန်းကုန်း)၊ရွှေလင်းယုန်၊ရွက်လှေစားသောက်ဆိုင် (ဆွာ) ၊ ရွှေတောင်တန်း (ဝမ်းတွင်း) စားသောက်ဆိုင်တွေက Express ကားတွေ တစ်ထောက်ရပ်နားတဲ့ လူသိများ အောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ဆိုင်တွေပေါ့။
အဲဒီအထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ကေတုမတီမြို့သစ်နဲ့ကပ်လျှက်ကျွန်းကုန်းကျေးရွာလေးက ရန်ကုန်ထမင်းဆိုင်လေးကိုတော့ဧည့်သည်ကြိုပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ခရီးသွားချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရန်ကုန်ထမင်းဆိုင်ကနေ ကားလာစောင့်စီးရတယ်ဗျ။
ကားမစီးဖြစ်လည်း ကျွန်တော်အားကျတဲ့ဆိုင်လေးကို အနည်းဆုံး ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်သောက်ပြီး ခနခနထိုင်ခဲ့ဖူးတယ်။ရောက်တိုင်းလည်း Express ကားတွေဝင်ပြီးခရီးသည်တွေစည်ကားလှတဲ့ဒီဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်အားကျနေဖြစ်ခဲ့တာက ၁၉၉၂/၉၃ လောက်ကတည်းကပါ။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒီဆိုင်လေးရပ်နားပိတ်သိမ်းတော့မယ်ဆိုတော့ ကံတရားဖေးမမှုက ကျွန်တော်ဘက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ ပိုင်အိုးနီးယား စားသောက်ဆိုင်မှာ ပထမဆုံးရပ်နားခဲ့ပြီး Express ကားတွေပေါ်ပါ စားသုံးသူ ခရီးသည်တွေကိုရောင်းချဖို့ စတင် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ တဲ့ယာဉ်လိုင်းကတော့ တစ်ချိန်က အလွန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ #LEO_Expressယာဉ်လိုင်းပါ။
ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ယာဉ်လိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ယခုအချိန်ထိအမြဲအမှတ်တရကျေးဇူးတင်နေဆဲပါ။စတင်ရပ်နားခဲ့စဉ်က LEO ကားတစ်စီးနဲ့စခဲ့ပါတယ်။လူအများကြီးတစ်ပြိုင်တည်းကျတဲ့ အတွေ့အကြုံမရှိသေးတော့ Leo ကားစဆိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဝန်ထမ်းအယောက်၆၀ကျော်နဲ့ မောင်းတင်ပြီး Service ပေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့ကျွန်တော် တကယ်တန်းယာဉ်ပေါ်ပါ အယောက်၄၀ကျော်သောခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို ဘယ်လိုမှ စားသောက်ဖွယ်ရာ ပစ္စည်းတွေ မိနစ်၂၀ကျော်အတွင်း တပြိုင်နက်ရောက်အောင် ရောင်းချနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါဟာ…ကျွန်တော်ရဲ့ ပထမဆုံး Express ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို ရောင်းချရတဲ့ အတွေ့ကြုံသစ်ပါ။
တစ်လလောက်အကြာမှာ ဆွာမှာရပ်နားနေတဲ့ ရွှေမန်းသူ/ရှမ်းမလေးယာဉ်လိုင်းတစ်လိုင်းလုံး ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုပြောင်ရွှေ့ရပ်နားခဲ့ပါတယ်။ LEO Express ယာဉ်လိုင်းကို တစ်လတာရောင်းချနိုင်ခဲ့အပြီးမှာ လိုအပ်ချက်တွေကို အချိန်မီဖြည့်စီးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့လို့များပြားစွာဝင်ရောက်ရပ်နားလာတဲ့ရွှေမန်းသူ/ရှမ်းမလေး၊မန်းရွှေပြည်၊အစရှိတဲ့ ယာဉ်လိုင်း တွေဝင်ရောက်လာမှု ကိုအဆင်ပြေစွာရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ဆိုင်ဖွင့်ပြီး ၂နှစ်လောက်အကြာမှာ ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၆ခုနှစ်ကပေါ့ အသက်က ၃၃နှစ်။ဒီနေရာမှာ ကိုယ်ယူထားတဲ့ ဇနီးအကြောင်း အနည်းငယ် ကိုယ်ရည်သွေးချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်နဲ့မယူခင်က ရှန်ဟိုင်းလိုကုန်တိုက်ကြီးမှာ အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေဝန်ထမ်းပေါင်းမြောက်များစွာကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ရပြီး၊တရုတ်ပြည်ကိုအခေါက်ခေါက်သွားခဲ့ဖူးသလို။
Dynasty ကုမ္ပဏီ ရဲ့ Marketing ပိုင်း မှာလည်း ကုမ္ပဏီတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့အရည်အချင်းအပြည့်ရှိသူတစ်ယောက်ပါ။အလုပ်မလုပ်ရရင်မနေနိုင်တဲ့သူကလေးဗျ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် လက်မထပ်ခင်စပ်ကြားမှာ ကျွန်တော်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အစားသောက်အချက်ပြုတ်သင်တန်း၊ဖျော်ရည်သင်တန်း၊ရေခဲမုန့်သင်တန်း၊မုန့်သင်တန်း တွေကို အချိန်မီ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး အချိန်မှာတော့ ဆိုင်ရဲ့ အဓိက လိုအပ်တဲ့အစားအသောက်ထုတ်လုပ်မှု အပိုင်းမှာ လက်ရင်းတပည့်များစွာကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သလို သူကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် စားသောက်ဆိုင်လောကမှာ ပိုင်အိုးနီးယားကို ပိုမိုအရှိန်မြင့် လူသိများ လာစေခဲ့တာပေါ့ဗျာ။
ဒီလိုနဲ့ နှစ်ယောက်ပေါင်း အပင်ပန်းခံကြိုးစားမှုကနေ….တဆင့်စကားတဆင့်ကြားလို့ဆိုင်မှာရပ်နားလာကြတဲ့ Expressကားတွေ ပိုပိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်။လမ်းဟောင်းမှာတုန်းက Express ကားတွေ မကြာခဏ Accidentဖြစ်ရင် ယာဉ်ပိုင်ရှင်တွေ၊ဂိတ်ပိုင်တွေ အချိန်မီမလာရောက်နိုင်ခင်အချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်က ဂိတ်ပိုင်၊ကားပိုင်တွေကိုယ်စား ညအချိန်မတော် အခင်းဖြစ်ပွားနေရာကို အရောက်သွားပြီး လူအား၊ငွေအားစိုက်ထုတ်ပြီး ကိစ္စအဝဝ ကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်ကိစ္စမပြတ်လို့ မိုးလင်းမှ အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေကလည်းမနည်းဘူးဗျ။ညအချိန်မတော် ဖုန်းလာရင် ၊ဂိတ်ပိုင်၊ယာဉ်ပိုင်တွေ ကြောက်ကြသလိုပဲ ဘယ်ကားက ဘယ်မှာ ဘာနဲ့တိုက်လိုက်လို့ဆိုတာမျိုး ဖုန်းဆက်လာရင် ကျွန်တော်လည်း ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ကြောက်နေရတယ်။အခုချိန်ထိလည်း မည်သည့် ယာဉ်လိုင်းမဆို အကူညီတောင်းလာရင် ကူညီပေးနေတုန်းပါပဲ။
ဒါကြောင့် မောင်တထမ်း၊မယ်တရွက် ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ရလာဒ်တခုအနေနဲ့ ပိုင်အိုးနီးယား မှာ တဖြေးဖြေး လာရောက်ရပ်နားကြတဲ့ Express ကားအစီးရေဟာ အလွန်များပြားလာခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ။ဒီလိုများပြားလှတဲ့ Express ကားတွေကို နေရာကျယ်ဝန်းစွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးလို့ရအောင် ဆိုင်ကိုစုထားတဲ့ပိုက်ဆံလေးတွေနဲ့အကောင်းဆုံးပြုပြင်မွမ်းမံလို့ပြီးတာနဲ့ မကြာခင်မှာပဲ အမြန်လမ်းမကြီးက စတင်အသက်ဝင်လာပါတော့တယ်။ကားတွေအမြန်လမ်းပေါ်ကပဲ သွားနေကြပါပြီ…ကျွန်တော်ကိုမိသားစုသဖွယ်ခင်မင်ကြတဲ့ယာဉ်လိုင်းတွေကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ယာဉ်လိုင်းတွေအကုန်လုံး အမြန်လမ်းပေါ်က ၁၀၅မိုင်စားသောက်ဆိုင်၊တင်တင်အေးမြန်မာထမင်းဆိုင်တွေမှာရပ်နားနေကြတော့လမ်းဟောင်း ပိုင်အိုးနီးယားမှာ ဝင်ရောက်စားသုံးကြတဲ့ Express ကားတွေသိသိသာသာလျော့နည်းလာတာပေါ့ဗျာ….. ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ….ကံစီမံရာကိုပဲလိုက်လုပ်ရတော့မှာပေါ့…..။
အမြန်လမ်းသစ်ကြီးဖွင့်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး Restcamp ယာဉ်ရပ်နားစခန်းကြီးက လယ်မြေအတိုင်းပဲရှိနေပါသေးတယ် Restcamp မှာ ဆိုင်နေရာချပေးတော့ ပိုင်အိုးနီးယား ကတစ်နေရာ ရခဲ့ပါတယ်။ လမ်းသစ်ကြီးဖွင့်ပွဲမှာ လက်ရှိ Restcamp ဆိုင်မြေနေရာချထားမှုကို လူကြီးတွေ သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက် ယာယီဆိုင် တွေဆောက်လုပ်ခိုင်းပြီး ကျွန်တော် ပိုင်အိုးနီးယားဆိုင် ကိုတော့ လမ်းသစ်ဖွင့်ပွဲမှာ အရောင်းပြနိုင်အောင် တာဝန်ပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
ဆိုင်တွေ အတွက်နေရာချထားပေးထားတဲ့ နေရာက မြေမဖို့ရသေးတဲ့လယ်ကွင်းပဲရှိသေးပေမယ့်၊အဲဒီလယ်ကွင်းပေါ်မှာပဲ ဘုန်းကြီးငါးပါးပင့်ဖိတ်လို မြေသန့်ပရိတ်တရားကို နာခဲ့ပါသေးတယ်။ ဖွင့်ပွဲနီးကပ်မှ အရောင်းပြရမယ်လို့ တာဝန်ပေးခြင်းခံရတော့..ယာယီဝါးနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၁၅မိုင်မှာ ပထမဆုံး ရောင်းချပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။
Restcamp တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေ မပြီးပြတ်သေးတာနဲ့ ၁၁၅မိုင် ယာဉ်ဝန်းအတွင်းမှာပဲ (၃)နေရာလောက်ပြောင်းရွေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရပြီး၊ရေ၊မီး၊နေထိုင်ရမှုအခက် အခက်အခဲတွေကြောင့် တစ်လမပြည့်ခင်မှာပဲ ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ကားအများစုက အမြန်လမ်းမကြီးကနေပဲ သွားနေကြတော့…လမ်းဟောင်းက ကျွန်တော်ဆိုင်မှာ ရပ်နားလာကြတဲ့ကားတွေ သိသိသာသာလျော့နည်းလာပါတော့တယ်။
၁၁၅မိုင် ယာဉ်ရပ်နားစခန်း မှာ စားသောက်ဆိုင်ခန်းတွေ ဆောက်လုပ်မှု မပြီးသေးတော့ လမ်းဟောင်းမှာ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေတဲ့ ဆိုင်တွေက အမြန်လမ်းဘေး နီးစပ်ရာ လယ်ကွင်းတွေမှာ ယာယီဆိုင်တွေ ဖွင့်ပြီးရောင်းချနေတဲ့အချိန် ကျွန်တော်က လမ်းဟောင်းမှာပဲ ရှိနေသေးတယ်ဗျ။ လမ်းဟောင်းကဆိုင်နဲ့ အမြန်လမ်း ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကနီးတော့ ကျွန်တော်ဆီမှာရပ်နားနေတဲ့ ယာဉ်လိုင်းတွေကို အချိန်တစ်ခုအထိတော့ ထိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဆိုင်ထဲကို ဝင်ရောက်ရပ်နားတဲ့ကားတွေကို တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ကပ်လျှက်လမ်းကနေလာရတော့၊ ကားတွေပေါ်ကို လုံခြုံရေးအရ တက်စစ်ရတာနဲ့ လိုင်စင်တက်စစ်ရတာနဲ့ကတမျိုး၊သံလမ်းစောင့်တဲ့သူကလည်း ည၉နာရီကျော်ရင် တစ်ခါမှမပိတ်တဲ့ရထားသံလမ်းကို ပိတ်ပြီးကားတွေကိုရစ်လို့ ညတိုင်း လဖက်ရည်နဲ့ပဲပလာတာ ဆက်ကပ်ပြီးဖားရတာလည်းအကြိမ်ကြိမ်၊ကြာတော့ ဆိုင်ကို ဝင်နားမဲ့ ကားတွေက အမြန်လမ်းကပဲ အစစ်အဆေးကင်းစွာသွားချင်လာကြတယ်။
၁၁၅မိုင် က ယာဉ်ရပ်နားစခန်းကလည်း မပြီးသေးသလို မသေခြာတဲ့နေရာတခုမှာ ဆိုင်တွေကလည်း ဖွင့်လှစ်ရောင်းချဖို့အတွက် စိုးရိမ်နေကြတယ်၊ကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့ဗျာ။ဒီလိုနဲ့ သူများတွေ ဖွင့်သလိုမျိုး ကျွန်တော်ဆိုင်ဟောင်းနဲ့ နီးစပ်ရာမြေနေရာလိုက်ကြည့်ပြီး၊ဆိုင်မှာရက်နားနေတဲ့ ယာဉ်လိုင်းတွေ မိတ်မပျက်သွားရအောင်၊ခရီးသွားစားသုံးသူတွေ စားသောက်မှုအဆင်ပြေစေဖို့၊အန္တရာယ်ကင်းစွာ အပေါ့အပါးသန့်စင်ခန်းသွားလို့ရအောင် (၁၅၄) မိုင် ယာယီဆိုင်ကြီးကိုအမြန်ဆုံး ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနိုင်ဖို့စီစဉ်ရတော့တာပေါ့။ဒါကြောင့်သူများတွေ မိုးခါးရည်သောက်ခဲ့သလို ကျွန်တော်လည်းလိုက်သောက်ခဲ့ရပြီပေါ့ဗျာ။
အရင်ဆုံး မိုးတွင်းကြီးဆိုတော့ ကားတွေရပ်နားဖို့အတွက် ကွန်ကရစ်လမ်းဘေးမှာ အမာခံ ကျောက် ကျင်းပေါင်းများစွာဖို့ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ရသလို၊ကျွန်တော်ထက်အရင် ယာယီဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေကြတဲ့ ဆိုင်တွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကို ပြင်ဆင်ပြီး ၁၂ရက်အတွင်းမှာ သတ်ရပ်ကျယ်ဝန်းတဲ့ ယာယီဆိုင်ကြီးကို အပြီးဆောက်လုပ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့လို့လည်း ပိုင်အိုးနီးယား နဲ့ မိတ်ဆွေရင်းတွေအဆက်မပြတ်ခဲ့ရတာပေါ့။
ဝင်ရောက်လာတဲ့စားသုံးသူတွေကိုလစ်ဟင်းမှုမရှိစေရန်နှင့်၁၅၀ကျော်သော ဝန်ထမ်းတွေကို အုပ်ချုပ်မှုမဝေးကွာစေရန်အတွက် ယာယီအဆောက်အဦးလေးကိုဆိုင်နဲ့တွဲဆောက်ထားပြီး တစ်နှစ်အရွယ်သမီးကြီးနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ပါပြောင်းရွေ့နေခဲ့ကြပါတယ်။ ယာယီဆိုင်ဖြစ်ပေမဲ့ စနစ်တကျ ရှိလှတဲ့ ကျွန်တော်ဆိုင်ကို မူရင်းရပ်နားနေကြ ယာဉ်လိုင်းတွေအပြင်၊ ထပ်မံ ဝင်ရောက်ရပ်နားလာကြတဲ့ ယာဉ်လိုင်းများ၊ခရီးသွားကားလေးတွေမြောက်များစွာရပ်နားခဲ့တာကြောင့် ယာယီဆိုင်ဖွင့်ပြီ မကြခင်မှာပဲ….ခြောက်သွေ့လှတဲ့ အမြန်လမ်း ၁၅၄မိုင်မှာ ၂၄နာရီ ခရီးသွားများနဲ့ စည်ကားလွန်းလှတဲ့နေရာတစ်နေရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရယ်၊ဇနီးရယ်၊သမီးကြီးရယ်… တဖြေးဖြေးနဲ့နေသားကျလာလို့ ၈လပြည့်တဲ့အချိန်မှာ ပိုင်အိုးနီးယား စားသောက်ဆိုင်ကို အမြန်လမ်း ၁၁၅မိုင် ယာဉ်ရပ်နားစခန်း သို့ တစ်လအတွင်း ပြောင်းရွေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ အမိန့်နဲ့စာတစ်စောင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။
ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၁၁၅မိုင်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့အချိန်မှာ.ကျွန်တော်ထက် တစ်လကြိုပြီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကတော့ FEEL Express ဆိုင်ပါခင်ဗျ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက Feel မှာ Express ကားရောင်းချနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိသေးတော့ Express ကားတွေက ၁၅၄မိုင်မှာရှိတဲ့ ပိုင်အိုးနီးယား ယာယီ ဆိုင်ကြီးမှာပဲစုပြုံတိုးနေကြလို့ လူကြီးတွေရဲ့ မျက်စိဆံပင်မွှေးဆူးခြင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။
ကျွန်တော် ၁၅၄ မိုင်မှာဖွင့်နေသ၍ ၁၁၅မိုင်ဟာ အသက်မဝင်ငြိမ်သက်နေမှာသိတော့ တစ်လအတွင်း ယာယီဆိုင်အပြီးပိတ်သိမ်းပြီး၊ယာဉ်ရပ်နားစခန်းမှာ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချဖို့အတွက်အမိန့်ထုတ်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ ။ဒါမှလည်း Express ကားတွေနဲ့ Restcamp ကြီးက အသက်ဝင်စည်ကားလာမှာလေဗျာ။ကျွန်တော်ကို တစ်လအတွင်း အမိန့်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခိုင်းပေမဲ့ ဆိုင်၅ဆိုင်ရှိတဲ့ ၁၁၅မိုင်က Restcamp ကြီးမှာ နောက်ဆုံးမှဆောက်နေတဲ့ဆိုင်က ကျွန်တော်ဆိုင်ဗျ။အမိုးနဲ့အရိုးပဲရှိသေးတဲ့ဆိုင်ကို တစ်လအတွင်း အပြီးပြောင်းရွေ့ရမယ်ဆိုတော့….ဆိုတော့ကားးးးး…….
ကျွန်တော် လုံးပမ်းရပါပြီ။၁၁၅မိုင်မှာ တစ်လအတွင်း ဆိုင်မဖွင့်နိုင်ရင်တောင်၊၁၅၄မိုင်ယာယီဆိုင်ကိုတော့ တစ်လအတွင်းပိတ်ပေးရမှာတော့သေခြာတယ်ဗျ။သူတို့ပေးတဲ့ တစ်လဆိုတဲ့ target ကို အချိန်မီဖွင့်လှစ်နိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အပြင် အဖေနဲ့အမေ ပါစိတ်ပူစွာနဲ့ပါဝင်လာရပြီပေါ့ဗျာ။
ယာယီဆိုင်ကိုလည်း ကားတွေအဝင်အထွက်များလို့စိတ်မချဖြစ်ရသလို၊မကြာခင်ပြောင်းရွေ့ရမယ့်ဆိုင်တည်ဆောက်ရေးကိုလည်းအချိန်မီ ပြီးစီးရေးအတွက် ၁၅၄နဲ့၁၁၅မိုင် အကွာဝေးကို နေ့စဉ် မရေတွက်နိုင်အောင် အသွားအပြန်ပြုလုပ်ရင်း ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် အပင်ပန်းခံခဲ့ရပါတယ်။တစ်လအကြာမှာတော့ ယာယီဆိုင်ကိုအပြီးပိတ်သိမ်းပြီး လက်စ မသတ်သေးတဲ့ ၁၁၅မိုင် ယာဉ်ရပ်နားစခန်းကို ၂၇.၃.၂၀၁၀ မှာပြောင်းရွေ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အလုံးစုံအပြီးမသတ်နိုင်သေးတဲ့ဆိုင်မှာ ရောင်းချရတာဆိုတော့ အခက်အခဲတွေအကြပ်တည်းတွေကို မနည်းကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတာပါ။
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ ကျွန်တော်ဇနီး ပုဂံဝင်ကူးဆေးပေးနေရသလို၊အိမ်သာသန့်ရှင်းရေးကို စိတ်တိုင်းမကျတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အိမ်သာကြွေခွက်၊ဆီးခွက်တွေကို ကိုယ်တိုင်ဝင်ဆေးရသည်အထိ ဗရုတ်သုတ်ခ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဓိက ကဆိုင်နာမည်မပျက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတာပါ။ဒီလို ခက်ခဲစွာကြိုးစားရင်း ကျွန်တော်ဇနီး ဒုတိယ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခဲ့ရလို့ နှစ်ယောက်စလုံးပူဆွေးသောက ရောက်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ အခုလိုအခက်အခဲပေါင်းမြောက်များစွာကို ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် တက်ညီလက်ညီ အောင်မြင်စွာ ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့လို့လည်း ၁၄နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ စားသုံးသူတွေအကြား ပိုင်အိုးနီးယား က အခိုင်အမာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။
စေတနာ၊ကံ၊ဥာဏ်၊လုံးလ၊ဝီရိယ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရတဲ့ နောက်ဆုံးရလာဒ်က တော့ ပိုင်အိုးနီးယား စားသောက်ဆိုင်ကို လူတိုင်းအသိအမှတ်ပြုစားသောက်လာကြတဲ့ ရလာဒ်တခုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ ၁၈.၇.၂၀၁၈. နေ့ဟာ ပိုင်အိုးနီးယား စားသောက်ဆိုင် စတင်ထူထောင်ခဲ့တာ (၁၄)နှစ်ပြည့်ခဲ့တဲ့နေ့ပေါ့။ကျွန်တော် ကို ကေတုမတီမြို့သစ်မှာ ပိုင်အိုးနီးယား စားသောက် ဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို #ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုရလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတစ်လကျပ်သိန်း၃၀ပုံမှန်ကန်တော့ခဲ့ပါတယ်။
#အဖေနဲ့အမေရဲ့လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုလည်းအမြဲအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးနေဆဲပါ။ဒီလိုမိဘကျေးဇူးသိတတ်ခဲ့မှုကြောင့်လည်း ပိုင်အိုးနီးယား က ၁၄နှစ်တာကာလအတွင်းတရှိန်ထိုးနာမည်ရလာခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ ကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်အိုးနီးယား စားသောက်ဆိုင်အား ၁၄နှစ်တာကာလအတွင်း အားပေးခဲ့ကြတဲ့ စားသုံးသူမိတ်ဆွေများ၊ ညီအစ်ကိုရင်းပမာလက်တွဲလို့ ယုံကြည်စွာ ရပ်နားပေးကြသော၊ယာဉ်လိုင်းဂိတ်ပိုင်များ၊ယာဉ်ပိုင်ရှင်ကြီးများနှင့် အကောင်းအဆိုးဝေဖန်အကြံပြုပေးကြပါသော မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတို့အားဒီနေရာမှ အလေးအနက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောကြားပါရစေ။
#တကယ်တော့ဘယ်အရာမှလွယ်လွယ်ရခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး….ရိုးသားခြင်းနဲကြိုးစားခြင်းရလာဒ်ကို အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကြီးက အမြဲစီးကြိုနေမယ်ဆိုတာ….ကျွန်တော်တို့အားလုံး သိထားဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာ။ပိုင်အိုးနီးယား နာမည်တစ်လုံးအတွက် ၁၄နှစ်တာကြိုးစားလာခဲ့ရပုံကို ၁၄နှစ်ပြည့်တဲ့ ဒီကနေ့မှာ အကျဉ်ချုံးတင်ပြလိုက်ပါရစေ…..#ဒီpostလေးဖတ်ပြီးဘဝအတွက်ခွန်အားတစ်ခုရကြပါစေ။ ဆက်လက်ကြိုးစားလျှက်ပါ။
ကျေးဇူးရှင်စားသုံးသူအပေါင်းအား ရိုသေလေးစားတဲ့…ကျွန်တော် ဇော်မိုး ပိုင်အိုးနီးယား ၁၁၅#မိုးသောကြာ
Credit-Zaw Hla Myint Facebook Account မှကူးယူဖော်ပြသည်။
၁၄နှဈသားပိုငျအိုးနီးယား 14years_Old ( 18/07/2004 -2018 )
၁၃နှဈသားပိုငျအိုးနီးယား အကွောငျးတငျဖွဈခဲ့ပမေယျ့မညျသို့မညျပုံ Fbပျေါမှပြောကျသှားသညျမသိ။အခု(၁၄)နှဈပွညျ့အမှတျတရအဖွဈပွနျလညျတငျပွလိုကျရပါသညျ။ဒီနေ့(၁၈.၇.၂၀၁၈ )ဟာ ပိုငျအိုးနီးယား စားသောကျဆိုငျ ကိုစတငျတညျထောငျခဲ့တဲ့ (၁၄)နှဈပွညျ့တဲ့နပေ့ါ။အဖနေဲ့အမရေဲ့ ယုံကွညျစှာ တာဝနျပေးမှုနဲ့အတူ…ကြှနျတျောရဲ့စတေနာ၊ကံ၊ဉာဏျ၊လုံးလ၊ဝီရိယ တို့ကို အရငျးတညျပွီး နေ့/ညမပွတျ ရိုးသားစှာကွိုးစားခဲ့ရတဲ့ရလာဒျတဈခုကတော့ ယနေ Pioneer Food Centre ဆိုတဲ့ နာမညျတဈခု စားသောကျဆိုငျလောကမှာ အခိုငျအမာရပျတညျနိုငျခဲ့တာပါပဲ ။ ဒီနာမညျလှလှလေးကို ပေးခဲ့သူက ကြှနျတျောအဖပေါ။
လူသူမထူထပျသေးတဲ့ကတေုမတီမွို့သဈကလေးမှာ စားသောကျဆိုငျဖှငျ့မယျလုပျတော့ တခြို့လူတှကေ ကြှနျတျောတို့သားအဖကို အရူးတဲ့။ လူတှဘေယျလိုပဲပွောနပွေောနေ ပိုငျအိုးနီးယား ဆိုတဲ့ စားသောကျဆိုငျလေးတဈဆိုငျ လူသူမထူထပျသေးတဲ့ ကတေုမတီမွို့သဈလေးမှာအောငျမွငျစှာပေါကျဖှားလာနိုငျခဲ့ပါတယျ။
စရောငျးခါစက..လူနေ အလှနျ ကြဲပါးတဲ့အနီးနားပတျဝနျးကငျြကို အားကိုးလို့ မရပမေဲ့ တောငျငူကနေ ၁၄မိုငျဝေးတဲ့ကြှနျတျောဆိုငျလေး ကို လာရောကျအားပေးကွတဲ့ အသိမိတျဆှတှေမြေားပွားခဲ့သလို..နပွေညျတျောတညျဆောကျရေးလုပျငနျးကိုသှားကွတဲ့ လုပျငနျးရှငျကွီးတှနေဲ့ဝနျထမျးတှအေတှကျကလညျး ကတေုမတီမွို့သဈလေးမှာတညျရှိနတေဲ့ ပိုငျအိုးနီးယား စားသောကျဆိုငျကို မဖွဈမနေ တဈထောကျရပျနားအနားယူရတဲ့နရောလေးတဈခုအဖွဈသဘောထားလာကွတာက ပိုငျအိုးနီးယားရဲ့ ရှငျသနျခွငျးအစပါ ။
Express ကားတှေ စရောငျးဖွဈခဲ့တာကလညျး ဆိုငျဖှငျ့ပွီးတဈနှဈအကြျောမှာ ယာဉျလိုငျးတဈလိုငျး ကြှနျတျောဆီကိုလာရောကျ ခြိတျဆကျရာမှ စတငျပွီး Express ကားရပျနားတဲ့ဆိုငျလောကထဲကို ကြှနျတျောစပွီးကူးပွောငျးဖွဈခဲ့တာပေါ့။
Express ကားလောက ကို ရောငျးခရြတာ သာမနျ ရိုးရိုးစားသောကျဆိုငျတှရေောငျးခတြာနဲ့မတူပါဘူး။ကားတဈစီး လူအယောကျ ၄၀ကြျောကို နာရီဝကျအတှငျး အစားအသောကျ အမွနျ ရောငျးခရြတဲ့လုပျငနျးပါ။နာရီဝကျဆိုတာထကျ သနျ့စငျခနျးသှားပွီးကနျြတဲ့အခြိနျ လေးမှာ မှာတာကို အရောကျခပြေးရတဲ့ ရောငျးခနြညျးတဈမြိုးပေါ့။
ဒီလိုရောငျးခနြိုငျဖို့အတှကျ အစိမျးသကျသကျဖွဈနတေဲ့ ကြှနျတျောတို့အဖို့ လှယျကူလှတဲ့အရာတခုတော့မဟုတျဘူးဗြ။ယခငျက လမျးဟောငျး Express ကားလောကဆိုငျတှဖွေဈတဲ့စိနျပနျးနီစားသောကျဆိုငျ(ပဲခူး) ၊ ရနျကုနျထမငျးဆိုငျ(ကြှနျးကုနျး)၊ရှလေငျးယုနျ၊ရှကျလှစေားသောကျဆိုငျ (ဆှာ) ၊ ရှတေောငျတနျး (ဝမျးတှငျး) စားသောကျဆိုငျတှကေ Express ကားတှေ တဈထောကျရပျနားတဲ့ လူသိမြား အောငျမွငျခဲ့ကွတဲ့ဆိုငျတှပေေါ့။
အဲဒီအထဲမှာ ကြှနျတျောတို့ ကတေုမတီမွို့သဈနဲ့ကပျလြှကျကြှနျးကုနျးကြေးရှာလေးက ရနျကုနျထမငျးဆိုငျလေးကိုတော့ဧညျ့သညျကွိုပို့တာပဲဖွဈဖွဈ၊ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ခရီးသှားခငျြလို့ပဲဖွဈဖွဈ ရနျကုနျထမငျးဆိုငျကနေ ကားလာစောငျ့စီးရတယျဗြ။
ကားမစီးဖွဈလညျး ကြှနျတျောအားကတြဲ့ဆိုငျလေးကို အနညျးဆုံး ကျောဖီတဈခှကျလောကျသောကျပွီး ခနခနထိုငျခဲ့ဖူးတယျ။ရောကျတိုငျးလညျး Express ကားတှဝေငျပွီးခရီးသညျတှစေညျကားလှတဲ့ဒီဆိုငျလေးကိုကြှနျတျောအားကနြဖွေဈခဲ့တာက ၁၉၉၂/၉၃ လောကျကတညျးကပါ။
အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဒီဆိုငျလေးရပျနားပိတျသိမျးတော့မယျဆိုတော့ ကံတရားဖေးမမှုက ကြှနျတျောဘကျကိုရောကျလာခဲ့ပါတယျ။ကြှနျတျောရဲ့ ပိုငျအိုးနီးယား စားသောကျဆိုငျမှာ ပထမဆုံးရပျနားခဲ့ပွီး Express ကားတှပေျေါပါ စားသုံးသူ ခရီးသညျတှကေိုရောငျးခဖြို့ စတငျ မိတျဆကျပေးခဲ့ တဲ့ယာဉျလိုငျးကတော့ တဈခြိနျက အလှနျအောငျမွငျခဲ့တဲ့ #LEO_Expressယာဉျလိုငျးပါ။
ကြှနျတျောရဲ့ကြေးဇူးရှငျယာဉျလိုငျးတဈခုအနနေဲ့ယခုအခြိနျထိအမွဲအမှတျတရကြေးဇူးတငျနဆေဲပါ။စတငျရပျနားခဲ့စဉျက LEO ကားတဈစီးနဲ့စခဲ့ပါတယျ။လူအမြားကွီးတဈပွိုငျတညျးကတြဲ့ အတှအေ့ကွုံမရှိသေးတော့ Leo ကားစဆိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ဝနျထမျးအယောကျ၆၀ကြျောနဲ့ မောငျးတငျပွီး Service ပေးမယျလို့စိတျကူးထားတဲ့ကြှနျတျော တကယျတနျးယာဉျပျေါပါ အယောကျ၄၀ကြျောသောခရီးသှားဧညျ့သညျတှကေို ဘယျလိုမှ စားသောကျဖှယျရာ ပစ်စညျးတှေ မိနဈ၂၀ကြျောအတှငျး တပွိုငျနကျရောကျအောငျ ရောငျးခနြိုငျစှမျးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါဟာ…ကြှနျတျောရဲ့ ပထမဆုံး Express ခရီးသှားဧညျ့သညျတှကေို ရောငျးခရြတဲ့ အတှကွေုံ့သဈပါ။
တဈလလောကျအကွာမှာ ဆှာမှာရပျနားနတေဲ့ ရှမေနျးသူ/ရှမျးမလေးယာဉျလိုငျးတဈလိုငျးလုံး ကြှနျတျောဆိုငျကိုပွောငျရှရေ့ပျနားခဲ့ပါတယျ။ LEO Express ယာဉျလိုငျးကို တဈလတာရောငျးခနြိုငျခဲ့အပွီးမှာ လိုအပျခကျြတှကေို အခြိနျမီဖွညျ့စီးဆောငျရှကျနိုငျခဲ့လို့မြားပွားစှာဝငျရောကျရပျနားလာတဲ့ရှမေနျးသူ/ရှမျးမလေး၊မနျးရှပွေညျ၊အစရှိတဲ့ ယာဉျလိုငျး တှဝေငျရောကျလာမှု ကိုအဆငျပွစှောရောငျးခနြိုငျခဲ့ပါပွီ။
ဆိုငျဖှငျ့ပွီး ၂နှဈလောကျအကွာမှာ ကြှနျတျောအိမျထောငျပွုခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၀၆ခုနှဈကပေါ့ အသကျက ၃၃နှဈ။ဒီနရောမှာ ကိုယျယူထားတဲ့ ဇနီးအကွောငျး အနညျးငယျ ကိုယျရညျသှေးခငျြပါသေးတယျခငျဗြ။ကြှနျတျောနဲ့မယူခငျက ရှနျဟိုငျးလိုကုနျတိုကျကွီးမှာ အရေးကွီးတဲ့အခနျးကဏ်ဍကနဝေနျထမျးပေါငျးမွောကျမြားစှာကိုအုပျခြုပျခဲ့ရပွီး၊တရုတျပွညျကိုအခေါကျခေါကျသှားခဲ့ဖူးသလို။
Dynasty ကုမ်ပဏီ ရဲ့ Marketing ပိုငျး မှာလညျး ကုမ်ပဏီတိုးတကျအောငျဆောငျရှကျပေးခဲ့တဲ့အရညျအခငျြးအပွညျ့ရှိသူတဈယောကျပါ။အလုပျမလုပျရရငျမနနေိုငျတဲ့သူကလေးဗြ။ ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျ လကျမထပျခငျစပျကွားမှာ ကြှနျတျောလုပျကိုငျနတေဲ့ စားသောကျဆိုငျလုပျငနျးဆိုငျရာ အစားသောကျအခကျြပွုတျသငျတနျး၊ဖြျောရညျသငျတနျး၊ရခေဲမုနျ့သငျတနျး၊မုနျ့သငျတနျး တှကေို အခြိနျမီ တကျရောကျခဲ့ပွီး ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျ လကျထပျခဲ့ပွီး အခြိနျမှာတော့ ဆိုငျရဲ့ အဓိက လိုအပျတဲ့အစားအသောကျထုတျလုပျမှု အပိုငျးမှာ လကျရငျးတပညျ့မြားစှာကိုမှေးထုတျပေးနိုငျခဲ့သလို သူကိုယျတိုငျ ဦးဆောငျဖွညျ့စှကျပေးနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ စားသောကျဆိုငျလောကမှာ ပိုငျအိုးနီးယားကို ပိုမိုအရှိနျမွငျ့ လူသိမြား လာစခေဲ့တာပေါ့ဗြာ။
ဒီလိုနဲ့ နှဈယောကျပေါငျး အပငျပနျးခံကွိုးစားမှုကနေ….တဆငျ့စကားတဆငျ့ကွားလို့ဆိုငျမှာရပျနားလာကွတဲ့ Expressကားတှေ ပိုပိုမြားပွားလာခဲ့ပါတယျ။လမျးဟောငျးမှာတုနျးက Express ကားတှေ မကွာခဏ Accidentဖွဈရငျ ယာဉျပိုငျရှငျတှေ၊ဂိတျပိုငျတှေ အခြိနျမီမလာရောကျနိုငျခငျအခြိနျတှမှော ကြှနျတျောက ဂိတျပိုငျ၊ကားပိုငျတှကေိုယျစား ညအခြိနျမတျော အခငျးဖွဈပှားနရောကို အရောကျသှားပွီး လူအား၊ငှအေားစိုကျထုတျပွီး ကိစ်စအဝဝ ကိုတာဝနျယူဖွရှေငျးပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အလုပျကိစ်စမပွတျလို့ မိုးလငျးမှ အိမျပွနျရောကျခဲ့တဲ့ ရကျတှကေလညျးမနညျးဘူးဗြ။ညအခြိနျမတျော ဖုနျးလာရငျ ၊ဂိတျပိုငျ၊ယာဉျပိုငျတှေ ကွောကျကွသလိုပဲ ဘယျကားက ဘယျမှာ ဘာနဲ့တိုကျလိုကျလို့ဆိုတာမြိုး ဖုနျးဆကျလာရငျ ကြှနျတျောလညျး ရငျတထိတျထိတျနဲ့ကွောကျနရေတယျ။အခုခြိနျထိလညျး မညျသညျ့ ယာဉျလိုငျးမဆို အကူညီတောငျးလာရငျ ကူညီပေးနတေုနျးပါပဲ။
ဒါကွောငျ့ မောငျတထမျး၊မယျတရှကျ ကွိုးစားခဲ့ရတဲ့ရလာဒျတခုအနနေဲ့ ပိုငျအိုးနီးယား မှာ တဖွေးဖွေး လာရောကျရပျနားကွတဲ့ Express ကားအစီးရဟော အလှနျမြားပွားလာခဲ့ရတာပေါ့ဗြာ။ဒီလိုမြားပွားလှတဲ့ Express ကားတှကေို နရောကယျြဝနျးစှာ ဝနျဆောငျမှုပေးလို့ရအောငျ ဆိုငျကိုစုထားတဲ့ပိုကျဆံလေးတှနေဲ့အကောငျးဆုံးပွုပွငျမှမျးမံလို့ပွီးတာနဲ့ မကွာခငျမှာပဲ အမွနျလမျးမကွီးက စတငျအသကျဝငျလာပါတော့တယျ။ကားတှအေမွနျလမျးပျေါကပဲ သှားနကွေပါပွီ…ကြှနျတျောကိုမိသားစုသဖှယျခငျမငျကွတဲ့ယာဉျလိုငျးတှကေလှဲပွီး ကနျြတဲ့ယာဉျလိုငျးတှအေကုနျလုံး အမွနျလမျးပျေါက ၁၀၅မိုငျစားသောကျဆိုငျ၊တငျတငျအေးမွနျမာထမငျးဆိုငျတှမှောရပျနားနကွေတော့လမျးဟောငျး ပိုငျအိုးနီးယားမှာ ဝငျရောကျစားသုံးကွတဲ့ Express ကားတှသေိသိသာသာလြော့နညျးလာတာပေါ့ဗြာ….. ကြှနျတျောဘာလုပျရမလဲ….ကံစီမံရာကိုပဲလိုကျလုပျရတော့မှာပေါ့…..။
အမွနျလမျးသဈကွီးဖှငျ့ပှဲမှာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပထမဆုံး Restcamp ယာဉျရပျနားစခနျးကွီးက လယျမွအေတိုငျးပဲရှိနပေါသေးတယျ Restcamp မှာ ဆိုငျနရောခပြေးတော့ ပိုငျအိုးနီးယား ကတဈနရော ရခဲ့ပါတယျ။ လမျးသဈကွီးဖှငျ့ပှဲမှာ လကျရှိ Restcamp ဆိုငျမွနေရောခထြားမှုကို လူကွီးတှေ သိရှိနိုငျစဖေို့အတှကျ ယာယီဆိုငျ တှဆေောကျလုပျခိုငျးပွီး ကြှနျတျော ပိုငျအိုးနီးယားဆိုငျ ကိုတော့ လမျးသဈဖှငျ့ပှဲမှာ အရောငျးပွနိုငျအောငျ တာဝနျပေးခွငျးခံခဲ့ရပါတယျ။
ဆိုငျတှေ အတှကျနရောခထြားပေးထားတဲ့ နရောက မွမေဖို့ရသေးတဲ့လယျကှငျးပဲရှိသေးပမေယျ့၊အဲဒီလယျကှငျးပျေါမှာပဲ ဘုနျးကွီးငါးပါးပငျ့ဖိတျလို မွသေနျ့ပရိတျတရားကို နာခဲ့ပါသေးတယျ။ ဖှငျ့ပှဲနီးကပျမှ အရောငျးပွရမယျလို့ တာဝနျပေးခွငျးခံရတော့..ယာယီဝါးနဲ့တညျဆောကျခဲ့ပွီး ၁၁၅မိုငျမှာ ပထမဆုံး ရောငျးခပြွနိုငျခဲ့တဲ့ ဆိုငျအဖွဈ မှတျတမျးဝငျသှားခဲ့ပါတယျ။
Restcamp တညျဆောကျရေးလုပျငနျးတှေ မပွီးပွတျသေးတာနဲ့ ၁၁၅မိုငျ ယာဉျဝနျးအတှငျးမှာပဲ (၃)နရောလောကျပွောငျးရှဖှေ့ငျ့လှဈခဲ့ရပွီး၊ရေ၊မီး၊နထေိုငျရမှုအခကျ အခကျအခဲတှကွေောငျ့ တဈလမပွညျ့ခငျမှာပဲ ပွနျလညျရုတျသိမျးခဲ့ပါတယျ။ကားအမြားစုက အမွနျလမျးမကွီးကနပေဲ သှားနကွေတော့…လမျးဟောငျးက ကြှနျတျောဆိုငျမှာ ရပျနားလာကွတဲ့ကားတှေ သိသိသာသာလြော့နညျးလာပါတော့တယျ။
၁၁၅မိုငျ ယာဉျရပျနားစခနျး မှာ စားသောကျဆိုငျခနျးတှေ ဆောကျလုပျမှု မပွီးသေးတော့ လမျးဟောငျးမှာ ဖှငျ့လှဈရောငျးခနြတေဲ့ ဆိုငျတှကေ အမွနျလမျးဘေး နီးစပျရာ လယျကှငျးတှမှော ယာယီဆိုငျတှေ ဖှငျ့ပွီးရောငျးခနြတေဲ့အခြိနျ ကြှနျတျောက လမျးဟောငျးမှာပဲ ရှိနသေေးတယျဗြ။ လမျးဟောငျးကဆိုငျနဲ့ အမွနျလမျး ကိုဆကျသှယျထားတဲ့လမျးကနီးတော့ ကြှနျတျောဆီမှာရပျနားနတေဲ့ ယာဉျလိုငျးတှကေို အခြိနျတဈခုအထိတော့ ထိမျးထားနိုငျခဲ့ပမေဲ့ ဆိုငျထဲကို ဝငျရောကျရပျနားတဲ့ကားတှကေို တိုငျးစဈဌာနခြုပျနဲ့ကပျလြှကျလမျးကနလောရတော့၊ ကားတှပေျေါကို လုံခွုံရေးအရ တကျစဈရတာနဲ့ လိုငျစငျတကျစဈရတာနဲ့ကတမြိုး၊သံလမျးစောငျ့တဲ့သူကလညျး ည၉နာရီကြျောရငျ တဈခါမှမပိတျတဲ့ရထားသံလမျးကို ပိတျပွီးကားတှကေိုရဈလို့ ညတိုငျး လဖကျရညျနဲ့ပဲပလာတာ ဆကျကပျပွီးဖားရတာလညျးအကွိမျကွိမျ၊ကွာတော့ ဆိုငျကို ဝငျနားမဲ့ ကားတှကေ အမွနျလမျးကပဲ အစဈအဆေးကငျးစှာသှားခငျြလာကွတယျ။
၁၁၅မိုငျ က ယာဉျရပျနားစခနျးကလညျး မပွီးသေးသလို မသခွောတဲ့နရောတခုမှာ ဆိုငျတှကေလညျး ဖှငျ့လှဈရောငျးခဖြို့အတှကျ စိုးရိမျနကွေတယျ၊ကြှနျတျောအပါဝငျပေါ့ဗြာ။ဒီလိုနဲ့ သူမြားတှေ ဖှငျ့သလိုမြိုး ကြှနျတျောဆိုငျဟောငျးနဲ့ နီးစပျရာမွနေရောလိုကျကွညျ့ပွီး၊ဆိုငျမှာရကျနားနတေဲ့ ယာဉျလိုငျးတှေ မိတျမပကျြသှားရအောငျ၊ခရီးသှားစားသုံးသူတှေ စားသောကျမှုအဆငျပွစေဖေို့၊အန်တရာယျကငျးစှာ အပေါ့အပါးသနျ့စငျခနျးသှားလို့ရအောငျ (၁၅၄) မိုငျ ယာယီဆိုငျကွီးကိုအမွနျဆုံး ဖှငျ့လှဈရောငျးခနြိုငျဖို့စီစဉျရတော့တာပေါ့။ဒါကွောငျ့သူမြားတှေ မိုးခါးရညျသောကျခဲ့သလို ကြှနျတျောလညျးလိုကျသောကျခဲ့ရပွီပေါ့ဗြာ။
အရငျဆုံး မိုးတှငျးကွီးဆိုတော့ ကားတှရေပျနားဖို့အတှကျ ကှနျကရဈလမျးဘေးမှာ အမာခံ ကြောကျ ကငျြးပေါငျးမြားစှာဖို့ပွီးဆောငျရှကျခဲ့ရသလို၊ကြှနျတျောထကျအရငျ ယာယီဖှငျ့လှဈရောငျးခနြကွေတဲ့ ဆိုငျတှရေဲ့အားနညျးခကျြတှကေို ပွငျဆငျပွီး ၁၂ရကျအတှငျးမှာ သတျရပျကယျြဝနျးတဲ့ ယာယီဆိုငျကွီးကို အပွီးဆောကျလုပျရောငျးခနြိုငျခဲ့လို့လညျး ပိုငျအိုးနီးယား နဲ့ မိတျဆှရေငျးတှအေဆကျမပွတျခဲ့ရတာပေါ့။
ဝငျရောကျလာတဲ့စားသုံးသူတှကေိုလဈဟငျးမှုမရှိစရေနျနှငျ့၁၅၀ကြျောသော ဝနျထမျးတှကေို အုပျခြုပျမှုမဝေးကှာစရေနျအတှကျ ယာယီအဆောကျအဦးလေးကိုဆိုငျနဲ့တှဲဆောကျထားပွီး တဈနှဈအရှယျသမီးကွီးနဲ့အတူ ကြှနျတျောတို့ပါပွောငျးရှနေ့ခေဲ့ကွပါတယျ။ ယာယီဆိုငျဖွဈပမေဲ့ စနဈတကြ ရှိလှတဲ့ ကြှနျတျောဆိုငျကို မူရငျးရပျနားနကွေ ယာဉျလိုငျးတှအေပွငျ၊ ထပျမံ ဝငျရောကျရပျနားလာကွတဲ့ ယာဉျလိုငျးမြား၊ခရီးသှားကားလေးတှမွေောကျမြားစှာရပျနားခဲ့တာကွောငျ့ ယာယီဆိုငျဖှငျ့ပွီ မကွခငျမှာပဲ….ခွောကျသှလှေ့တဲ့ အမွနျလမျး ၁၅၄မိုငျမှာ ၂၄နာရီ ခရီးသှားမြားနဲ့ စညျကားလှနျးလှတဲ့နရောတဈနရောဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ကြှနျတျောရယျ၊ဇနီးရယျ၊သမီးကွီးရယျ… တဖွေးဖွေးနဲ့နသေားကလြာလို့ ၈လပွညျ့တဲ့အခြိနျမှာ ပိုငျအိုးနီးယား စားသောကျဆိုငျကို အမွနျလမျး ၁၁၅မိုငျ ယာဉျရပျနားစခနျး သို့ တဈလအတှငျး ပွောငျးရှဖှေ့ငျ့လှဈဖို့ အမိနျ့နဲ့စာတဈစောငျရောကျလာခဲ့ပါပွီ။
ယာဉျရပျနားစခနျး၁၁၅မိုငျကို စတငျဖှငျ့လှဈတဲ့အခြိနျမှာ.ကြှနျတျောထကျ တဈလကွိုပွီး ဖှငျ့လှဈခဲ့တဲ့ဆိုငျကတော့ FEEL Express ဆိုငျပါခငျဗြ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက Feel မှာ Express ကားရောငျးခနြိုငျတဲ့အတှအေ့ကွုံမရှိသေးတော့ Express ကားတှကေ ၁၅၄မိုငျမှာရှိတဲ့ ပိုငျအိုးနီးယား ယာယီ ဆိုငျကွီးမှာပဲစုပွုံတိုးနကွေလို့ လူကွီးတှရေဲ့ မကျြစိဆံပငျမှေးဆူးခွငျးခံခဲ့ရပါသေးတယျ။
ကြှနျတျော ၁၅၄ မိုငျမှာဖှငျ့နသေ၍ ၁၁၅မိုငျဟာ အသကျမဝငျငွိမျသကျနမှောသိတော့ တဈလအတှငျး ယာယီဆိုငျအပွီးပိတျသိမျးပွီး၊ယာဉျရပျနားစခနျးမှာ ဖှငျ့လှဈရောငျးခဖြို့အတှကျအမိနျ့ထုတျခဲ့ရတာပေါ့ဗြာ ။ဒါမှလညျး Express ကားတှနေဲ့ Restcamp ကွီးက အသကျဝငျစညျကားလာမှာလဗြော။ကြှနျတျောကို တဈလအတှငျး အမိနျ့နဲ့ဖှငျ့လှဈခိုငျးပမေဲ့ ဆိုငျ၅ဆိုငျရှိတဲ့ ၁၁၅မိုငျက Restcamp ကွီးမှာ နောကျဆုံးမှဆောကျနတေဲ့ဆိုငျက ကြှနျတျောဆိုငျဗြ။အမိုးနဲ့အရိုးပဲရှိသေးတဲ့ဆိုငျကို တဈလအတှငျး အပွီးပွောငျးရှရေ့မယျဆိုတော့….ဆိုတော့ကားးးးး…….
ကြှနျတျော လုံးပမျးရပါပွီ။၁၁၅မိုငျမှာ တဈလအတှငျး ဆိုငျမဖှငျ့နိုငျရငျတောငျ၊၁၅၄မိုငျယာယီဆိုငျကိုတော့ တဈလအတှငျးပိတျပေးရမှာတော့သခွောတယျဗြ။သူတို့ပေးတဲ့ တဈလဆိုတဲ့ target ကို အခြိနျမီဖှငျ့လှဈနိုငျအောငျ ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျအပွငျ အဖနေဲ့အမေ ပါစိတျပူစှာနဲ့ပါဝငျလာရပွီပေါ့ဗြာ။
ယာယီဆိုငျကိုလညျး ကားတှအေဝငျအထှကျမြားလို့စိတျမခဖြွဈရသလို၊မကွာခငျပွောငျးရှရေ့မယျ့ဆိုငျတညျဆောကျရေးကိုလညျးအခြိနျမီ ပွီးစီးရေးအတှကျ ၁၅၄နဲ့၁၁၅မိုငျ အကှာဝေးကို နစေ့ဉျ မရတှေကျနိုငျအောငျ အသှားအပွနျပွုလုပျရငျး ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျ အပငျပနျးခံခဲ့ရပါတယျ။တဈလအကွာမှာတော့ ယာယီဆိုငျကိုအပွီးပိတျသိမျးပွီး လကျစ မသတျသေးတဲ့ ၁၁၅မိုငျ ယာဉျရပျနားစခနျးကို ၂၇.၃.၂၀၁၀ မှာပွောငျးရှဖှေ့ငျ့လှဈနိုငျခဲ့ပါတယျ။အလုံးစုံအပွီးမသတျနိုငျသေးတဲ့ဆိုငျမှာ ရောငျးခရြတာဆိုတော့ အခကျအခဲတှအေကွပျတညျးတှကေို မနညျးကြျောဖွတျခဲ့ရတာပါ။
ကိုယျဝနျကွီးနဲ့ ကြှနျတျောဇနီး ပုဂံဝငျကူးဆေးပေးနရေသလို၊အိမျသာသနျ့ရှငျးရေးကို စိတျတိုငျးမကတြဲ့ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလညျး အိမျသာကွှခှေကျ၊ဆီးခှကျတှကေို ကိုယျတိုငျဝငျဆေးရသညျအထိ ဗရုတျသုတျခ နိုငျခဲ့ပါတယျ။အဓိက ကဆိုငျနာမညျမပကျြအောငျကွိုးစားခဲ့ရတာပါ။ဒီလို ခကျခဲစှာကွိုးစားရငျး ကြှနျတျောဇနီး ဒုတိယ ကိုယျဝနျပကျြကခြဲ့ရလို့ နှဈယောကျစလုံးပူဆှေးသောက ရောကျခဲ့ရပါသေးတယျ။ အခုလိုအခကျအခဲပေါငျးမွောကျမြားစှာကို ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျ တကျညီလကျညီ အောငျမွငျစှာ ကြျောလှားနိုငျခဲ့လို့လညျး ၁၄နှဈတာကာလအတှငျးမှာ စားသုံးသူတှအေကွား ပိုငျအိုးနီးယား က အခိုငျအမာရပျတညျနိုငျခဲ့တာပေါ့ဗြာ။
စတေနာ၊ကံ၊ဉာဏျ၊လုံးလ၊ဝီရိယ ကွိုးစားအားထုတျခဲ့ရတဲ့ နောကျဆုံးရလာဒျက တော့ ပိုငျအိုးနီးယား စားသောကျဆိုငျကို လူတိုငျးအသိအမှတျပွုစားသောကျလာကွတဲ့ ရလာဒျတခုကိုရရှိခဲ့ပါတယျ။ဒီကနေ့ ၁၈.၇.၂၀၁၈. နဟေ့ာ ပိုငျအိုးနီးယား စားသောကျဆိုငျ စတငျထူထောငျခဲ့တာ (၁၄)နှဈပွညျ့ခဲ့တဲ့နပေ့ေါ့။ကြှနျတျော ကို ကတေုမတီမွို့သဈမှာ ပိုငျအိုးနီးယား စားသောကျ ဆိုငျကိုဖှငျ့လှဈပေးခဲ့ပွီး လမျးကွောငျးမှနျပျေါတငျပေးခဲ့တဲ့ မိဘနှဈပါးကို #ကြှနျတျောအောငျမွငျမှုရလာပွီးနောကျပိုငျးမှာတဈလကပျြသိနျး၃၀ပုံမှနျကနျတော့ခဲ့ပါတယျ။
#အဖနေဲ့အမရေဲ့လိုအပျတာမှနျသမြှကိုလညျးအမွဲအလေးထားဆောငျရှကျပေးနဆေဲပါ။ဒီလိုမိဘကြေးဇူးသိတတျခဲ့မှုကွောငျ့လညျး ပိုငျအိုးနီးယား က ၁၄နှဈတာကာလအတှငျးတရှိနျထိုးနာမညျရလာခဲ့တယျဆိုရငျလညျးမမှားပါဘူး။ ကြှနျတျောရဲ့ပိုငျအိုးနီးယား စားသောကျဆိုငျအား ၁၄နှဈတာကာလအတှငျး အားပေးခဲ့ကွတဲ့ စားသုံးသူမိတျဆှမြေား၊ ညီအဈကိုရငျးပမာလကျတှဲလို့ ယုံကွညျစှာ ရပျနားပေးကွသော၊ယာဉျလိုငျးဂိတျပိုငျမြား၊ယာဉျပိုငျရှငျကွီးမြားနှငျ့ အကောငျးအဆိုးဝဖေနျအကွံပွုပေးကွပါသော မိတျဆှေ အပေါငျးအသငျးတို့အားဒီနရောမှ အလေးအနကျ ကြေးဇူးတငျပါကွောငျးပွောကွားပါရစေ။
#တကယျတော့ဘယျအရာမှလှယျလှယျရခဲ့တာတော့မဟုတျပါဘူး….ရိုးသားခွငျးနဲကွိုးစားခွငျးရလာဒျကို အောငျမွငျမှုပနျးတိုငျကွီးက အမွဲစီးကွိုနမေယျဆိုတာ….ကြှနျတျောတို့အားလုံး သိထားဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗြာ။ပိုငျအိုးနီးယား နာမညျတဈလုံးအတှကျ ၁၄နှဈတာကွိုးစားလာခဲ့ရပုံကို ၁၄နှဈပွညျ့တဲ့ ဒီကနမှေ့ာ အကဉျြခြုံးတငျပွလိုကျပါရစေ…..#ဒီpostလေးဖတျပွီးဘဝအတှကျခှနျအားတဈခုရကွပါစေ။ ဆကျလကျကွိုးစားလြှကျပါ။
ကြေးဇူးရှငျစားသုံးသူအပေါငျးအား ရိုသလေေးစားတဲ့…ကြှနျတျော ဇျောမိုး ပိုငျအိုးနီးယား ၁၁၅#မိုးသောကွာ
Credit-Zaw Hla Myint Facebook Account မှကူးယူဖျောပွသညျ။
မွေးရပ်မြေက အိမ်အိုလေးကို ရောက်ရင်း ဆင်းရဲတွင်းနက်ခဲ့တဲ့ တချိန်ကအတိတ်တွေကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ပိုးမီ
“သွေး လေးဘက်နာ… လုံးဝ အရှင်း… ပျောက်ကင်းတဲ့ ဆေး… ရဟန်းလေး၏စေတနာ…...